हाम्रा नेता भगवान होइनन्, मरेपछि स्वर्ग लादैनन् - Shikhar Post Shikhar Post
–शिवबहादुर बस्नेत (राजेन्द्र)
धर्मशास्त्रले भक्तहरुको खोजी गर्छ । त्यहा कुनैपनि प्रश्न गर्न पाइदैन । २०५१ सालको कुरा हो । एक जना महाजनले सप्ताह पुरान लगाएछन र मलाई पनि निम्ता थियो । बेलुकाको समयमा पुरान सुन्न हाजिर भएँ । पण्डितले पुरान भने हामीले सुन्यौ । पुरान सुन्दै जादा मेरो मनमा प्रश्नहरु उठे । फूलपाति चढाइसकेपछि पण्डितलाई मैले प्रश्न गर्ने अनुमति मागे र स्वीकृत पाए । मेरो प्रश्न थियो विभिन्न ग्रन्थहरुमा मीठो कथा रचिएको हुन्छ । त्यहा पात्रहरु हुन्छन । कथामा तिनै पात्रहरुको वर्णन गरिएको हुन्छ । र ती कथाका पात्रहरुले उत्तिनै अध्यायको पुरान भन्छन सुन्छन । ती पौरानिक पात्रले भनेको र सुनेको कथा के थियो ? हामी त ती पात्रको कथा सुन्छौ मख्ख हुन्छौ । दान गर्छौ । यसरी नै हामीले पढेको र सुनेको विषय आगामी दिनमा यो शास्त्रमा थप गरिन्छ ? भनेर प्रश्न गरे तर मैले ठूलै गाली खाए ।
अन्य पुरान सुन्ने भक्तहरुले मेरो सपोर्ट गरेनन । मेरो जिज्ञासा हल भएन । म आफ्ने बासस्थानमा फर्के र भोली पल्ट बिहान ती पण्डित त्यंहि आए र मलाई भने म तपाईलाई चिन्छु । तपाईले यसरी धर्मप्रति प्रश्न उठाउन पाउनु हुन्न । तपाईलाइ कानुनी दण्ड पनि हुन्छ । भनेर ती पण्डितले धम्क्याउने कोसिस गरे । मैले मेरो कुरा गरे । सक्नुहुन्छ मेरो जवाफ दिनुस, सक्नुहुन्न भने सक्दिन भन्नुस भनेर जवाफ दिए र सके जेल हाल्नुस वा पुलिसमा उजुरी गर्नुस । मेरो प्रश्न निरन्तर उठीरहन्छ भनेर पठाए ।
आज नेपाली राजनीतिमा पनि प्रश्न उठाउन सक्ने चेतना मर्दै गईरहेको छ । आफ्नो पंक्तिमा प्रश्न गर्नसक्ने राजनैतिक कार्यकर्ता उत्पादन बन्द भएको छ । प्रष्न उठ्यो कि रिङ आउट हुन्छ । भक्तहरुको जमातले सिर्जनाको काम गर्न सक्दैन । भक्त बन्ने संस्कारको अन्त्य गरौ । राजनीतिमा त्यसै झोलेहरु भनेर आरोप आउने गरेको छैन । अन्धभक्त कार्यकार्ता बन्नु देश जनता र आफैप्रति अन्याय हुन जान्छ ।
धर्मशास्त्रमा शिबभक्त, विष्णुभक्त, रामभक्त, कृष्णभक्त भनेजस्तै कांग्रेसभक्त, एमाले ओलीभक्त, माओवादीभक्त आदी भक्तको जमातले भोट माग्नेछन र भोटर्स पनि भक्त नै बनाउने कोसिस गर्छन । प्रस्न गर्ने, समस्या पहिचान गर्ने र समाधानका उपाय निकाल्ने काममा लाग्न सकेन भने एकले अर्काको आन्द्रा निकाल्न लागिपर्ने बाहेक केही काम हुदैन । को ? कसरी भक्त हो आफै छुट्याउनुस । माक्र्सवादले कार्यका पछाडि कारण हुन्छ, कार्यले परिणाम निकाल्छ भन्ने सिकाउछ । धर्मशास्त्रले भक्ति गर मरेपछि स्वर्ग जाउ भन्छ । हाम्रा नेता भगवान होइनन मरेपछि स्वर्ग लैजादैनन् । जीवित हुदा समाजलाई कसरी रुपान्तरण गर्छन भन्ने प्रश्न नै अहिलेको मुल प्रश्न हो ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का केन्द्रीय सदस्य बस्नेतको यो निजी बिचार हो । यसबारे तपाईंको प्रतिकृया लेखिपठाउनुहोस् ।
प्रकाशित मिति : आईतवार, ३ श्रावण २०७८ ०९:४०